China Toy boaty ho an'ny ankizy valizy taratasy baoritra miaraka amina mpamokatra sy mpamatsy | Huaguang
Box misy tahony
Boaty kilalao ho an'ny ankizy valizy taratasy baoritra misy tanany
Valizy taratasy miaraka amin'ny tahony
Size: 25 * 18 * 8.5cm
Ity valizy taratasy ity dia ampiasaina indrindra hamonosana fanomezana ho an'ny ankizy na handaminana kilalao kely ho an'ny ankizy. Ny tonony lehibe dia manga sy fotsy, ny famolavolana ny volavolan-teboka onja, toa madio, mahazo aina ary mahafatifaty, tena mety ho an'ny ankizy. Ary ny fampifangaroana loko toy izany, tsy azoko atao ny tsy mijery ity valizy ity, amin'ireo antony voalaza etsy ambony izay misy fiatraikany amin'ny fiovan'ny lokon'ny zavatra vita pirinty.
Ny pirinty amin'ny dingan'ny fanontana sy fitehirizana azy dia miova matetika ny volony, ny fahazavany, ny mahavoky azy, na ranomainty monochromatic io, na mihoatra ny karazana ranomainty loko roa, ao anaty na ivelan'ny hetsika, ny loko mety ho lasa maizina ary mety ho lasa maivana. Ny fenitry ny pirinty amin'ny kalitao tena tsara dia: vokatra maromaro alohan'ny sy aorian'ny loko maizimaizina mifanaraka, miloko, miaraka amin'izay ny santionany amin'ny loko maizina sy ny hazavan'ny ranomainty.
Maivana ny ranomainty - mahatohitra ny fiovan'ny volony sy ny volony
Ny ranomainty amin'ny tara-masoandro, ny lokony sy ny famirapiratany dia samy hafa amin'ny fiovana isan-karazany, ny fanoherana hazavana tanteraka ary ny tsy fanovana ny feon'ny ranomainty dia tsy, amin'ny hazavan'ny masoandro, ny loko ranomainty rehetra dia hamokatra ambaratongam-panovana isan-karazany. Misy karazany roa ny fiovana.
Malazo: eo ambanin'ny asan'ny tara-pahazavana ultraviolet, tsy mahazaka hazavana ny ranomainty, very ny loko mamirapiratra tany am-boalohany, lasa fotsy fotsy ny lokony. Indrindra fa ny ranomainty miloko maivana sy pirinty vita amin'ny loko efatra raha ny loko mavo sy mena dia manjavona haingana kokoa, ary miadana kokoa ny cyan sy ny ranomainty.
Kolontsaina: mifanohitra amin'ny fanontam-pirinty volom-borona mainty, maizina ny fiovan'ny loko eo ambanin'ny asan'ny tara-pahazavana, niova koa ny loko, antsoin'ny olona hoe fiovan'ny loko io.
Ny vokatry ny emulsification
Ny takelaka fanontana offsctdruckmasenten dia tsy azo sarahina amin'ny mando ny faritra banga amin'ny lovia, ny offsetdruckmasenten no rano voalohany amin'ny ranomainty, tsy maintsy ihodivirana ny fisehoan'ny emulsifying. Ny loko emulsion amin'ny ranomainty dia ho maivamaivana, saingy, aorian'ny famoahana ny rano dia afaka mamerina amin'ny laoniny ny loko tany am-boalohany, noho izany ny haben'ny rano, ny habetsaky ny emulsion, dia hiteraka fandokoana. Manokana, ny ambaratongan'ny emulsification ny tonon-dranomainty samy hafa tanteraka miaraka, ny fisehoan'ny fandokoana dia misongadina indrindra.
Milamina taratasy ambonin-taratasy
Ny fahamendrehan'ny taratasy sy ny fanaovana pirinty dia manana fifandraisana akaiky, fa tsy ny taratasy malama dia mila tsindry lehibe kokoa, mba hanaovana ny ranomainty ary mifandray tsara izy io. Toy ny fanaovana pirinty viscosity, liquidity, mitazona ny hatevin'ny sarimihetsika ranomainty, ny fitomboan'ny tsindry matetika dia mahatonga ny faritra miparitaka amin'ny molekiola, miaraka amin'izay koa, milentika amin'ny taratasy ny taratasy, nefa mbola tsy dia mifanerasera, toy ny: taratasy mifono sy taratasim-baovao amin'ny ny lovia vita pirinty vita pirinty mitovy manana fahasamihafana lehibe kokoa, mazava ho azy mifanohitra hafa vokatry ny fanontana.
Tsy mahazaka taratasy
Taratasy, koa ny haben'ny ny vokan'ny absorbent sy replication dia misy fifandraisana mivantana, mazàna amin'ny kalitaon'ny fanontam-pirinty fitaovana iray dia ravin-taratasy tsy manara-penitra, raha ny ranoka ranomainty, ny viscosity ambany, ny taratasy dia hisitrika fifandraisana misy sosona hafa, raha ny stoma volon'ondry savaivony lehibe kokoa noho ny savaivony ny sombintsombin'ny pigment, avy eo, na ny pigment aza dia tsofokaina, mihena ny voky ny fanindronana. Mila mampitombo ny hatevin'ny sosona ink amin'ny mety. Na izany aza, mba hampitomboana ny hatevin'ny sosona ranomainty, amin'ny fotoana anaovana embossing dia hiteraka "fiparitahana", misy fiantraikany amin'ny vokatry ny kopian'ny fanontana. Tsy mahazaka taratasy kely, afaka manao ny ankamaroan'ny sarimihetsika ranomainty mipoitra eo ambonin'ny taratasy, mba ho feno saturation tsara ny sosona ranomainty vita pirinty.
Ny permeability taratasy permeability taratasy dia lehibe, hahatonga ny hatevin'ny soson'ainkely ho manify, lehibe ny porey ambonin'ny taratasy, nefa koa ampidirina ao anaty taratasy amin'ny fotoana iray koa ny sombintsombin'ny pigment, koa misy ny loko. Noho izany antony izany, ny fampiasana ny solaitrabe, ny volavolan-taratasy tsy milamina ary ny tsiranoka misy ranomainty sy ny taratasy lehibe handinihana ny loko.
Ny pigment dia tsy mahatohitra hafanana
Ink amin'ny fizotran'ny fanamainana, ny ranomainty fanontam-pirinty vita amin'ny fingotra haingam-pandeha dia ny conjunctiva indrindra - ny fanamainana oxidation. Ny fanamainana ny fanontam-pirinty offset alohan'ny hisian'ny dingana raikitra, ny polymerization oksidasian'ny ranomainty dia fanehoan-kevitra exothermic, ny fanamainana haingana loatra dia hanome hafanana be dia be, raha avoaka miadana ny hafanana dia tsy hampisy loko pigment ny hafanana. Ohatra: ny ranomainty loko volamena manamaizina ary very ny famirapiratany tany am-boalohany.
Tamin'ny fotoana fanontana, ny takelaka fanontam-pirinty niavosa ho amin'ny stack, satria tafangona be loatra, ny tapany afovoan'ny ranomainty fanontana oxidation polymerization exothermic fanehoan-kevitra, hafanana dia tsy mora ny mandefa, avo loatra mari-pana eo amin'ny tapany afovoan'ny ny fandokoana bebe kokoa .
Menaka maina misy vokany maivana
Ny ranomainty miloko dia an'ny tonony mangatsiaka, mavo mavo, maitso emeraoda, farihy manga ary loko hafa, aza mampiasa menaka fanamainana mena, satria ny menaka fanamainana mena miaraka amin'ny volomparasy lalina kokoa, dia hisy akony amin'ny lokon'ny ranomainty.
Ny menaky ny fahamainana fotsy dia toa fotsy, fa ny konjunktiva kosa dia volontsôkôlà hatsatra aorian'ny oksiidasiôna. Raha be loatra ny menaky ny fahamainana fotsy, dia ho mavo volontsôkôla ny pirinty rehefa maina, raha ny lokon'ny ranomainty mainty toy ny maitso, mainty sy volomparasy misy menaka maina kosa dia tsy hisy vokany be.
Ny ranomainty dia tsy alkali - mahatohitra
Ny fanontana taratasy PH soatoavina = 7, ny taratasy tsy miandany no tena mety indrindra, ny pigment inorganic ankapobeny novokarin'ny asidra ranomainty, mahantra ny alkaly, asidra pigmenta organika, tsara kokoa ny alkaline, indrindra ny ranomainty manga, manga mainty mainty dia halazo miaraka amin'ny alkali. Alkali antonony mavo miloko mena, elektrômatika fanosotra foil stamping, India dia ho lasa volamena mavo taloha amin'ny akora misy alkaly, tsy misy gloss, taratasy alkaly malemy kokoa, matetika sendra amin'ny fanontana fanamafisam-peo aorian'ny famokarana misy adiresy alkaly, raha manangona haingon-trano fanontana vokatra dia alkaline fananana toy ny savony, savony, vovoka fanasana sy ny sisa, te-handinika ny fanoherana alkali, fanoherana ny saponification ny fanatanterahana ranomainty.
Ny fiantraikan'ny tontolo iainana mitahiry
Ny ankamaroan'ny vokatra fanontana amin'ny fitehirizana maharitra, dia tsy azo ihodivirana hampiseho ny fisehoan'ny mavo, ny antony mahatonga ireto lafiny maromaro ireto.
Ny fibre taratasy dia misy lignin sy fiovan'ny tarehy. Ny gazety vita pirinty amin'ny pirinty dia azo inoana fa ho mavo sy mora volo.
Fanontana offset efatra loko doka overprinter vokatra fanontam-pirinty, indrindra amin'ny tara-masoandro, ny toetr'andro, ny rivotra sy ny orana, ny fikajiana ny mari-pana any ivelany, sns., Satria ny loko dia tsy mahazaka maivana, mahazaka hafanana ary loko na manjavona.
Ny anton'ny fiovan'ny loko amin'ny zavatra vita pirinty dia miovaova ary tsy misy vokatra afaka manao ny zava-drehetra. Tahaka ity valizy taratasy ity dia mety miova ny lokony rehefa mandeha ny fotoana. Fa farafaharatsiny tsara tarehy izany rehefa ampiasaintsika.
Maharitra sy mora entina.
Sakano tsy hovohana mora foana izy io rehefa mitondra
Manana fahaizana lehibe kokoa ary afaka mitazona zavatra maro.
Teo aloha: Namboarina ho boribory fanomezana boaty misy boaty napetraka avo lenta
Manaraka: Custom logo Fanamboarana boaty firavaka vita tanana vita amin'ny vita amin'ny vita amin'ny vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita fanaarangaly mirary
Boaty fitehirizana baoritra
Boaty firavaka manokana
Boaty fanomezana kely
Boaty fanomezana divay